घरमा कुकुर पाल्दा मालिकलाई यस्ता फाइदा | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
(Tuesday, 19 February, 2019)
घरमा कुकुर पाल्दा मालिकलाई यस्ता फाइदा
सानैदेखि घरमै हुर्काएर आफैँले तालिम दिएको कुकुर निकै अनुशासित हुन्छ । चनाखो जनावर भएकाले कुकुरले घरका सदस्यलाई बिहान चाँडो उठाउन भूमिका खेल्छ । बिहानै उठेर भुक्दा उसले अलार्मको काम गरिरहेको हुन्छ । र, बिहान सबेरै उठ्ने व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ हुन्छ ।
अधिकांश सहरिया नेपाली बिहान उठेपछि घरबाहिर निस्किँदैनन् । घरमा कुकुर पाल्ने हो भने यस्तो बानीमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ । कुकुरले घरबाहिर निस्किने बहाना तयार पारिदिन्छ । बिहान उठेपछि कुकुरलाई दिसा–पिसाब गराउन या डुलाउन बाहिर लगिन्छ । जसले गर्दा कुकुरसँग खेल्दा र डुल्दा अल्छीपन अन्त्य हुन्छ ।
बिहानदेखि कोठाभित्रै टोलाएर बस्दा नकारात्मक कुराहरू खेल्ने खतरा रहन्छ । तर, २०–३० मिनेट कुकुरसँग खेल्दा मन स्फूर्त हुन्छ । खेल्ने क्रममा स्वतः शरीरलाई पनि कसरत पुग्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार रोमाञ्चक खेल खेल्नेको मस्तिष्कमा खुसी निम्त्याउने डोपामाइन र सेरोटोनिन केमिकलको मात्रा बढ्छ ।
एकपटक तालिम पाएको कुकुरले अनुशासन कहिल्यै तोड्दैन । तर, मान्छेले पटक–पटक जानाजान या अन्जानमा अनुशासन तोडिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुकुरको अनुशासनले मान्छेलाई झस्काउँछ र अनुशासनमा बस्न पाठ सिकाउँछ । घरका केटाकेटीलाई अनुशासनमा बस्न सिकाउन पनि कुकुरको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
दिनभरको कामले थकित या तनावपूर्ण अवस्थामा घर फर्किने मालिकलाई कुकुरले ढोकाबाटै स्वागत गरेर तनावमुक्त गराउन भूमिका खेल्छ । आफ्नो प्यारो कुकुर पुच्छर हल्लाउँदै स्वागत गर्न आइपुग्दा व्यक्तिले तनाव भुल्न थाल्छ । कुकुरसँगै केही बेर खेल्दै रमाउँदा दिग्दारी अन्त्य हुन्छ । कुकुरका गतिविधिले त्यो अवस्था आउनै दिँदैन । उसैसँग खेलेर दिन काट्न सकिन्छ ।
कुकुरसँगै बाहिर डुल्दा या खेल्दा शारीरिक कसरत हुन्छ । यस्तो कसरत मोटोपन नियन्त्रण गर्न, रक्तचाप सन्तुलनमा राख्न तथा मुटुसम्बन्धी रोग भएकालाई उपयोगी हुन्छ । वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित गर्दै अमेरिकाको बार्कपोस्टले घरमा कुकुर भएका व्यक्तिहरू बिरामी परे पनि चाँडै निको हुने लेखेको छ । हृदयाघात भएका व्यक्तिहरूमध्ये कुकुर पाल्नेहरू पूरै निको हुने सम्भावना दुई गुणा हुने देखिएको छ ।
कुकुर पालेपछि घरमालिकको उसप्रति प्रेम उत्तिकै हुन्छ । हेलचेक्र्याइँ गर्न मिल्दैन । त्यसैले रातिको खाना खाइसकेपछि सुत्नुअघि मालिकले कुकुरलाई एकछिन डुलाउने तथा दिसा–पिसाब गराउने गर्नुपर्छ । कुकुरप्रति गर्ने यस्तो जिम्मेवारीले फाइदा मालिकलाई नै मिलिरहेको हुन्छ । खानेबित्तिकै सुत्ने बानी टुटाइदिन्छ । खानेबित्तिकै नसुत्दा मोटोपन नियन्त्रणमा रहन्छ ।
सधै जवान देखिइरहने १५ आइडिया
गर्मीमा पानी कसरी र कति पिउने ?
बैशाख १, २०७५
गर्भवती महिलालाई पोषण आहार
साउन ८, २०७५
निन्द्रा नपुग्दा के हुन्छ ? अवस्य पढ्नुहोस् यस्तो छ…..
फागुन ५, २०७५
रोग कसैले भनेर लाग्दैन यदि यी १० लक्षण देखिए बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्यो !
हेर्नुहोस गुणकारी औषधि हो पूदिना: निको पार्छ यी रोगहरु ! जानी राखौ
जुन घरमा गरिन्छ यी ४ काम, त्यहाँ हुन्छ लक्ष्मीको वास
पशुपति शर्माको लुटन सके लुट कान्छा भन्ने गीतमा सरकार डराएकै हो?
५० वर्षीय ठाकुरले लुटे १० वर्षीया बालिकाको इज्जत
बालिकाको सामूहिक वलात्कारपछि हत्या
भारतीय युवामा असन्तुष्टि
कष्टडीमा पुगेका श्रेष्ठसँग डीएसपी केसीको हिमचिम, यस्तो छ कमाउने काइदा